Uyenza njani intetho ngePowerPoint | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Lola ifani | 18/02/2021 10:56 | Izixhobo zoYilo, Tutorials, Ezahlukeneyo
IMicrosoft PowerPoint sesinye sezixhobo ezisetyenzisiweyo sokwenza intetho. Kulula ukuyisebenzisa kwaye inikezela ngamathuba angenasiphelo xa kusenziwa uyilo loyilo kunye nobungcali. Kule posi siza kukubonisa ukuba ungayisebenzisa njani le nkqubo kwasekuqaleni, siya kukwazisa ngezixhobo ezisisiseko kwaye siya kubandakanya neengcebiso ezithile ukuze uphumelele ngezilayidi zakho Ngaba uyafuna ukufunda ukuba ungayenza njani intetho ngePowerPoint? Ungaphuthelwa yiyo yonke iposti.
1 Qalisa kwi-PowerPoint
1.1 Vula uxwebhu
1.2 Yenza isilayidi esitsha
1.3 Bonisa okanye ufihle abalawuli kunye nezikhokelo
2 Izixhobo eziphambili ukwenza iintetho kwiPowerPoint
2.2 Izixhobo zombhalo
2.3 Izixhobo zokulinganisa
2.3.1 Susa isixhobo semali
2.3.2 Iziphumo kunye nohlengahlengiso
2.5 Isixhobo seMizobo
3.1 Sebenzisa izixhobo zangaphandle
3.2 Khathalela umbala
Xa uvula inkqubo, uyakubona oko IPowerPoint ibonelela ngeetemplate esele ziyilelwe kwaye zikulungele ukuba ufake umxholo wakho. Ewe ungazisebenzisa, kodwa kule posi siya kukhetha ukukhetha uxwebhu olungenanto apho siza kongeza khona izinto kunye nezixhobo. Ukuze ufunde ngcono, qala ekuqaleni!
Ukuba sele unayo inkqubo evulekileyo, nayo Unokwenza amaxwebhu amatsha ngokunqakraza kwithebhu yefayile> intetho entsha kwimenyu ephezulu.
Yenza isilayidi esitsha
Kwiphaneli yasekhaya uneqhosha elithi "Isilayidi esitsha", ngokucofa kuyo uvelisa izilayidi ezitsha. Ukuba ucinezela utolo oluncinci ngasekunene kweqhosha, uyakubona oko Unokwenza izilayidi ezilandela itemplate emiselweyo. Kukho uyilo olwenzelwe uku-odola zonke iintlobo zomxholo: izihloko, isihloko kunye nomxholo, umxholo ophindwe kabini, ukwenza uthelekiso ...
Nangona kunjalo, ukuze sifunde ukusebenzisa izixhobo zenkqubo kufuneka isilayidi singabinanto kangangoko, ngoko ke asizukukhetha nanye kwaye siza kushiya isilayidi sethu singenanto.
Bonisa okanye ufihle abalawuli kunye nezikhokelo
Ukuze singahambisi izinto "ngamehlo" siza kuqalisa imigaqo nezikhokelo. Izikhokelo ziya kusinceda sigcine imida efanayo kuzo zonke izilayidi le ntetho.
Ukwenza kusebenze imigaqo nezikhokelo, into ekufuneka uyenzile kukuzikhetha kwi "jonga" isithuba.. Ingcebiso yam kukuba ugcine isikhokelo esisezantsi, nkqo kunye tye. Ukuba nescreen sahlulwe kane licebo elilungileyo loku-odola iziqwenga zakho.
Kananjalo kuya kufuneka wenze ezinye izikhokelo ezine ukuchaza ukuba imida yezilayidi zakho iya kuba yintoni na. Ukwenza izikhokelo ezintsha, kufuneka ucofe iqhosha "ukhetho" kwikhibhodi yekhompyuter yakho kwaye urhuqe esele zikhona. Qaphela ukuba xa usenza oku, ibhokisi ibonakala apho ibonisa ubude obeka khona. Nje ukuba ugqibezele eli nyathelo, ukulungele ukuqala ukuyila!
Izixhobo eziphambili ukwenza iintetho kwiPowerPoint
Esi sixhobo sinokuba luncedo kakhulu ekwenzeni izinto zokuhombisa ezinika isazisi kunye nobunye kuyilo lwakho. Ukongeza iimilo, Siya kwipaneli "faka"> iifom ". Uya kuvula imenyu encinci onokukhetha kuyo ngendlela ofuna ngayo.
Ukutshintsha iimpawu zefom siya kuya kwifomathi yefomathi yefom, apho unokutshintsha umbala wokugcwalisa, ungongeza umda kwaye usebenzise uhlobo oluthile lwesiphumo.
Kwimeko yam ndiza kudlala ngoxande abamnyama ukwenza iimodeli zesilayidi ezahlukeneyo:
Ndiza kwenza imodeli ndisebenzisa uxande njengebhanti yentloko, ndiyibeke ezantsi kwisilayidi
Ndiza kwenza isilayidi esinemvelaphi emnyama
Okokugqibela, ndiza kwenza ezinye iimodeli ezimbini apho uxande luvumela ukwahlulahlula iscreen kubini (enye inemilo esekunene enye inesimo esisekhohlo)
Kwakhona ungasebenzisa iimilo njengebhokisi yokubhaliweyo, ukuqaqambisa iinxalenye ezithile zomxholo.
Ukuba ufuna yenza iimilo zesiko, ungayenza! Ngokulula cofa kubume nakwipaneli yefomathi sebenzisa ukhetho "lungisa amanqaku" Ukutshintsha imilo yoqobo.
Kwiphaneli yefomathi unokucwangcisa iimilo Ungazisa iimilo ngaphambili, ungazithumela ngasemva kwaye usebenzise isixhobo sokulungelelanisa ungaqinisekisa ukuba zonke izinto zibekwe ngokugqibeleleyo.
Izixhobo zokubhaliweyo zibalulekile ukuba ufuna ukwenza intetho elungileyo. Kuba yenza ibhokisi yokubhaliweyo Kufuneka nje uye kwiqela lenjongo "Faka" kwaye ukhethe "ibhokisi yokubhaliweyo".
Unokwenza ucofa kanye ukuze ibhokisi ivumelane nento oza kuyibhala okanye ukuba ukhetha njalo, ungatsala imouse ukuze isicatshulwa sikhawulelwe kubungakanani obuthile.
Recuerda que unokukrwelela kwaye usebenzise amanqaku abalulekileyo ukutsala umdla kwiindawo ezithile zesicatshulwa sakho. Kumzekelo, ndibonakalise ubumnyama ukuze ndikwazi ukutshintsha ifonti emhlophe kwaye ndenze umahluko oxelela umfundi: "oku kubalulekile".
Okunye ukhetho lokubhaliweyo liLizwiArt, izicatshulwa ezizayo eyilwe yiPowerPoint kwaye ezineziphumo ezizodwa kunye neempawu. Ungenza ngokwezifiso ukuba ubanike ukubamba kwakho okanye uzilungelelanise nesitayile somboniso kwaye zizixhobo ezilungileyo kwiintloko zakho.
Imifanekiso yi isixhobo esinamandla kakhulu sonxibelelwano, kuba bayakwazi ukushwankathela isixa esikhulu somxholo kwisithuba esincinci kakhulu kwaye babangele impembelelo enkulu.
Kukho iindlela ezimbini zokongeza imifanekiso kwiPowerPoint yakho:
Ungaya kwiqela lenjongo "faka"> "imifanekiso" kwaye ukhethe "umfanekiso kwifayile"
Ungawurhuqa umfanekiso ngqo kwifolda.
Susa isixhobo semali
Sebenzisa imifanekiso ngaphandle kwemvelaphi kunokukunceda ukongeza ukubamba okwahlukileyo kwizilayidi zakho. Into elungileyo kukuba, ngenxa yesixhobo "sokususa imvelaphi", ungasusa imvelaphi kwiifoto zakho ngaphandle kokushiya iPowerPoint.
La isixhobo "susa imali", le iyafumaneka kwipaneli "yomfanekiso.", ethi ivele ngokuzenzekelayo phezulu kwiscreen xa ucofa nawuphi na umfanekiso. Kulula kakhulu ukuyisebenzisa, kufuneka nje khetha ngepensile "+" into ofuna ukuyigcina kunye nepensile "-" into ofuna ukuyisusa ukusuka kumfanekiso. Xa ugqibile, cofa uphawu ukuze ungaphulukani notshintsho.
Iziphumo kunye nohlengahlengiso
Ukuba imifanekiso yakho inesimbo esifanayo inokunika ibhonasi esemgangathweni kwinkcazo-ntetho yakho. Kwifomathi yomfanekiso unezixhobo ezimbini ezikhoyo ezikuvumela ukuba wenze uhlengahlengiso kwiifoto.
Ungasebenzisa izilungiso kunye nohlengahlengiso lwemibala ukunika imifanekiso yakho imbonakalo emanyeneyo izilayidi. Kumzekelo, ndikhethe ukubeka imifanekiso yam emnyama namhlophe kwaye ndilungelelanise ukukhanya ukuze iziphumo zibe ngcono.
Iimpawu, njengemifanekiso, zikwanamandla okushwankathela iikhonsepthi kwindawo encinci. Ngethamsanqa kwiPowerPoint Ungafaka ii icon ngaphandle kokushiya inkqubo. Ukuba ucinezela "ii icon" kwipaneli "faka", uya kungena kwiqela elisecaleni apho unemifanekiso engapheliyo onokukhetha kuyo. Sebenzisa injini yokukhangela ukucoca kwaye ufumane ezi ufuna ngokukhawuleza. Kwiphaneli "yemifanekiso ebonakala ngaphezulu xa ucinezela enye yazo, ungaziguqula kancinane ukuzilungelelanisa nendlela yokubonisa.
Imizobo iluncedo kakhulu ukuhambisa izimvo ngokubonakalayo, ngokukhawuleza nangokucacileyo. Gcina ukhumbula ukuba iigrafu azisebenzi kuphela ukubonisa idatha ebanzi, ungazisebenzisa njengesixhobo sokuyila ukuhambisa umyalezo ngenye indlela.
Ungadibanisa imizobo ngokuya ku iphaneli "faka"> "imifanekiso". Uya kuthi ke ufikelele kwipaneli encinci yokuwa ezantsi apho zonke iintlobo zemizobo ezibonelelwa yiPowerPoint. Khetha eyona ifanelekileyo kunye Iphepha le-Excel liya kuvulwa ngokuthe ngqo apho ungangenisa khona idatha. Xa ugqibile, akuyomfuneko ukugcina ispredishithi, yivale nje, ngelixa ungena kwidatha eya kuguqulwa.
Ungalutshintsha uhlobo lwetshathi, zombini icandelo elibhaliweyo kunye nomzobo. Ungayitshintsha ifonti kunye nobungakanani. Kwiphaneli yefomathi unokutshintsha isitayile somzobo kunye nemibala.
Sebenzisa izixhobo zangaphandle
Sebenzisa izixhobo zangaphandle licebo elilungileyo ukutyebisa uyilo lwesilayidi. Nangona iPowerPoint yinkqubo egqibeleleyo kwaye unokwenza imiboniso emikhulu ngezixhobo ezibonelela ngayo, ubuchule obongezelelweyo abusoze buhlungu!
Ngokomzekelo, ungaya kwiPicsart kuGoogle ukukhuphela izitifiketi eya kusebenza ukubonelela ngokukhethekileyo kwizilayidi. Ndihlala ndikhangela ngamagama "Vintage", "tape", "ibhokisi yemibhalo" kwaye ndisebenzisa ezizezona zindiqinisekisayo njengebhokisi yokubhaliweyo okanye njengesakhelo somfanekiso.
Umbala ukwasisixhobo sonxibelelwano, ukwanakho ukuvusa iimvakalelo kunye neemvakalelo. Ayifani ukukhetha olu manyano lweethoni ye-pastel kunokukhetha indibaniselwano etyheli, emnyama nomhlophe. Umahluko wale yokugqibela, indibaniselwano yemvelaphi emnyama nomhlophe okanye tyheli, ibonisa okungcono kakhulu. umyalezo wokuzonwabisa kunye nomngcipheko endiwusebenzisileyo kumzekelo. I-pastel esisidenge, nangona kunjalo, iya kulunge ngakumbi ukukhuthaza, umzekelo, uphawu lwempahla yomntwana.
Ukuba ufuna inkuthazo ungaya kwiColourLovers, iphepha lewebhu apho uza kufumana khona iipelethi esele zenziwe. Njengokuba Sisibonelelo esihle sokuya kumbala weAdobe ukwenza indibaniselwano ehambelanayo esebenza kakuhle.
KwiPowerPoint Unokwenza umbala wombala wakho. Ukuzisa enye yezi palettes kwi-PowerPoint, into endiqhele ukuyenza kukuthatha umfanekiso-skrini wayo, ukuyifaka kwisilayidi kwaye nge-eyedropper ndigcina yonke imibala endiza kuyisebenzisa kamva kwizinto zam kwintetho.
I-typography, njengombala, iyanxibelelana, ke kubalulekile ukuba uthathe ixesha lokukhetha iifonti elungileyo. Ukuba awuqinisekanga ngamagama osele uwafakile, unokukhuphela iifonti ezintsha kwi-intanethi. Ifonti kaGoogle yenye yeebhanki ezaziwa kakhulu zeefonti kwaye yenye yezona zinokuthenjwa.
Ukufakela iifonti ezintsha kufuneka ukhethe enye oyifunayo, uyikhuphele, uvule ifayile kwaye ucofe ukufaka ifonti.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Uyenza njani intetho ngePowerPoint